Aiza ve ka ao anatin’izao fotoan-tsarotra izao ianao sy ny ekipanao no mirehareha fa Rafôrsa ihany no hatolotrareo amin’ny 2018 fa iny ihany no mahavita azy. Mbola sahinareo ihany ny mirehareha fa mahavita azy ianareo, kanefa dia nabaribarinao tsy mahay manavaka vanim-potoana io akory fa tena fatritra ianareo satria ny olona maro efa mitsoaka noho ny tahotra ny hatelin-drapesta, kanefa ny anareo mbola zavatra hafa, dia ny hibodo an-drafahefana ihany. Dia mbola miseho hatrany ilay adin’ny kanosa amin’ny hikakana ny adversera matanjaka. Handeha indray ny fitsarana petatoko hamotehana iny olona iny sy ny mitovitovy aminy. Ny tsara aminao angamba Rabekonetaka mba mitsapa hery kely aloha hoe hatraiza ny donanao sy ny tanjakao fa ianao ity mantsy raha ny fahalalako anao dia ilay olona nasondro-potsiny tahaka ny kilaoty tapaka lasitika hatramin’izay ! Tsy adala r’ise izahay miteny hoe tsapao aloha ny herinareo a !